Ịga njem - kedu ndụmọdụ kacha mma itinye n'ọrụ? | Bezzia
Ndụmọdụ kacha mma maka njem
Susana godoy | 14/01/2022 12:00 | njem
Gaa na njem, hụ ebe ọhụrụ wee kwụsị njikọ Ha bụ ihe atọ na-amasịkarị anyị na ndị na-agakọ aka. Na mgbakwunye, a ga-ekwurịrị na ha dịkwa mkpa maka ahụike uche anyị. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịga njem, ọ kacha mma ka ị hazie ihe niile tupu oge eruo ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe fọdụrụ na pipeline.
Ewezuga nke ahụ, anyị na-ahapụ gị ndụmọdụ kachasị mma ka ị nwee ike itinye ha n'ọrụ. Ndụmọdụ bara uru nke ukwuu anyị maara mana ọ bụghị mgbe niile na-edozi ya ruo mgbe oge gafeworo. Yabụ, anyị emeela gị ndepụta ahụ. Ọ dị naanị ka ị were nwayọ gụọ ya wee dee ya nke ọma. Ezi ezumike!
1 Ejila ego gị niile n'otu ebe
2 Nzọ na ịmara ebe dị nso
3 Mee nyocha tupu ị gawa
4 Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa, mee mgbanwe
5 Ejila ọtụtụ uwe iji gaa njem
Ejila ego gị niile n'otu ebe
Ọ baghị uru ụgbọ njem anyị ga-eji gaa njem. Ihe kacha mma bụ na ị naghị ebu ego gị niile n'otu ebe. Ị nwere ike iburu gị ihe n'akpa gị na ntakịrị n'ime akpa gị, wdg. Maka otu a, anyị ga-agba mbọ hụ na, n'ihe ụfọdụ a na-atụghị anya ya, anyị agaghị atụfu ihe niile. Ọ bụ ezie na ego efu anyị aghaghị ibu ihe ma ọ bụghị nke ukwuu. A na-atụ aro ka ị nweta kaadị nke ị nwere ike ọ gaghị enwe oke ego mana ị nwere ezuru maka njem ahụ na nke ahụ abụghị ebe ị na-emefu ego ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ. N'ezie, ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-ekwe omume inwe ihe karịrị otu ma ọ dịghịkwa mkpa.
Nzọ na ịmara ebe dị nso
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ha ajụọ anyị gịnị bụ njem nke nrọ anyị ma ọ bụ ebe anyị chọrọ ịga, ha ga-arọ nrọ aha ndị dị anya dịka iwu. Ọfọn, a ghaghị ikwu na ọtụtụ oge anyị ga-enweta nnukwu ihe ịtụnanya ma ọ bụrụ na anyị abịaru nso n'ebe anyị bi. N'ihi na obodo na obodo gbara anyị gburugburu iji nyocha. Na mgbakwunye, anyị ji n'aka na anyị ga-ahụkwa nnukwu onyinye n'ihi na ọ bụghị mpaghara njem nleta karịsịa.
Mee nyocha tupu ị gawa
Ọ bụrụ na n'ikpeazụ a ga-ebupụ gị site na ebe a dị anya, mgbe ahụ ọ bara uru inyocha ntakịrị banyere ya. Ugbu a, anyị nwere teknụzụ na mkpịsị aka anyị yana pịa anyị nwere ike mara niile omenala, ya gastronomy na kasị eleta ebe. Yabụ, ọ naghị ewute gị na ị nwere ihe akwadoro gbasara ihe ị ga-eleta. Ee, ọ bụ eziokwu na ozugbo enwere atụmatụ ndị a nwere ike ịgbanwe dabere na oge a, mana opekata mpe, anyị nwere ike ịnwe ụfọdụ ebe a ga-ahụrịrị n'uche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa, mee mgbanwe
Isi ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-eme njem bụ ịchọ ịchekwa ego na mmefu. Ọfọn, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị ghara imefu nnukwu ego naanị na njem ahụ, mgbe ahụ ị ghaghị ịdị na-agbanwe n'ihe gbasara ụbọchị ma ọ bụ awa n'ozuzu. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọ a kpọmkwem ụbọchị na anyị na-aga kwupụta izu ụka, ahịa ga-skyrocket. Otu ihe ahụ na-eme na ebe ụfọdụ, ya mere anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nzọ n'ebe ndị dị nso ma ọ bụ na-amaghị nke ọma dị ka ndị anyị bu n'obi.
Ejila ọtụtụ uwe iji gaa njem
Otu n'ime oge kacha atụ egwu bụ oge ịkwakọ ngwaahịa. N'ihi na ọ dị ka anyị chọrọ ihe niile na ihe ndị ọzọ, ma anyị na-eji ihe na-erughị ọkara. Yabụ, dabere na oge anyị ga-eyi uwe ndị bụ isi na akpụkpọ ụkwụ dị mma maka ụbọchị ahụ ọzọ kwa nke ayi gāchọ n'abali. Ihe kachasị mma bụ ịkụ nzọ na echiche ndị bụ isi nke nwere ike mechaa gbanwee ụdị ma nye anyị anya nke abụọ naanị site na ịgbakwunye ngwa. Ihe na-eme na uwe ojii, ma ọ bụ jeans na uwe elu ọcha, dịka ọmụmaatụ. Ugbu a, ọ ga-afọdụ naanị ka ị na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị ga-aga njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » njem » Ndụmọdụ kacha mma maka njem
Àgwà ọma na-enyere gị aka inwe ahụ́ dị mma
Uwe ndị bụ isi nke ị ga-ahụ na ahịa Mango